दण्डहीनताले ग्रस्त राज्य (टिप्पणी)	| Bishow Nath Kharel
दण्डहीनताले ग्रस्त राज्य (टिप्पणी)
Source : Friday, 21 December 2012 23:42 नागरिक
किशोर नेपाल- कुनै पनि समाचार पत्रको कार्यालयमा छापिएका समाचारसँग असन्तुष्ट पक्षका मानिस व्यक्तिगत रूपमा अथवा समूह बनेर समाचारपत्रको सम्पादकसँग वार्ता, विवाद र झगडा गर्न आउनु सामान्य मानिन्छ। सूचना, विचार र सत्यको पहरेदारका रूपमा रहेका समाचारपत्रका सम्पादकले त्यस्ता वार्ता, विवाद र झगडा सल्टाएर सबैको चित्त बुझाउने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। यो अस्वाभाविक होइन। तर, जब क्रोध, आवेग र उत्तेजना बोकेका मानिसको समूह समाचारपत्रका विरुद्ध नियोजित रूपमा कार्यालय तोडफोड गर्ने, पत्रकारहरूको मानमर्दन गर्ने र कुटपिट गर्ने मनसाय बोकेर कार्यालयमा जबर्जस्ती प्रवेश गर्छ, त्यस्तोमा सम्पादक र पत्रकारले गर्न सक्ने के नै बाँकी रहन्छ?
विहीबार नागरिकका संवाददाता साथीहरूसँगको नियमित बैठकपछि प्रफुल्ल भएको यो पंक्तिकारले अनौठो स्थिति सामना गर्नुपर्‍यो। शिवसेना नेपालको रामनामी ओढेर गालीको वर्षा गर्दै हूल बाँधेर आएका मानिसको अराजक भीड निमेषभरमा नै कार्यालयको स्वागत कक्षमा प्रवेश गरेर हुलहुज्जत गर्न थालिसकेको थियो। स्वागत कक्षकी सबिना र सुरक्षाकर्मी श्यामलाई भीडले नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। भीडको बीचमा पुगेर मैले निर्भयतापूर्वक उनीहरू आउनुको कारण सोध्दा उनीहरू मलाई हातपात गर्न कस्सिसकेका थिए। नागरिक, नागरिककर्मी र मेराविरुद्ध उनीहरूले लगाएका आरोपमा न तथ्य थियो, न निरन्तरता। मैले उनीहरूलाई संवादका लागि बोलाउँदा उनीहरू उल्टै उत्तेजित र आक्रोशित भएर मेरो कोटको कल्लर समात्न पुगे। मेरा सहकर्मीहरूले आफूलाई जोखिममा राखेर मलाई जोगाए। बच्दाबच्दै पनि सुदर्शनको ओठमा मुड्की बर्सियो। स्वरुपको ढाडमा लात, राजेन्द्रको कुममा मुड्की- छेउ परेका कुनै साथी जोगिएनन्। आधा घण्टाजति निर्बाध चल्यो यो तमाशा। तै, प्रहरीहरू आएर स्थिति नियन्त्रणमा लिएकाले नागरिक कार्यालय जल्नबाट जोगियो।
को थिए यी आक्रमणकारी? नागरिकका स्थानीय वितरक कमल भण्डारीका अनुसार समूहमा विभाजित भएका केही व्यक्तिहरू नागरिकको साप्ताहिक प्रकाशन शुक्रबारमा प्रकाशित राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिबारेको विवरण पढेर आक्रोशित थिए। उनीहरूले पत्रिकाको वितरण रोक्न भने सकेका थिएनन्। कमलजीले यो बताएपछि म झल्याँस्स भएँ। नागरिकले मंसिर १२ गतेको अंकमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्तिको रेखदेखका लागि खडा भएको नेपाल ट्रष्टसँग सम्बन्धित समाचार छापेको थियो। बालकृष्ण अधिकारीले तयार पारेको त्यो समाचारको प्रकाशनपछि मेरा केही ‘शुभचिन्तक’ मित्रहरूले टेलिफोन गरेर यस्ता कुरामा हात नहाल्न सुझाव दिँदै भनेका थिए, ‘अब वीरेन्द्र सरकारको सम्पत्तिको कुरा कोट्याएर केही फाइदा छैन।’
नागरिक कार्यालयमा आक्रमण गर्नेहरु।
मेराप्रति ती मित्रहरूको सदाशयका बाबजुद हामीले राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिको सदुपयोगको आफ्नो मिसन जारी राखेका छौं। स्वर्गीय राजाको सम्पत्तिमा स्यालहरूको रजाइँ देशहितका विपरीत हुने भएकाले पनि हामी राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न दृढ रहेका छौं। अहिले स्वर्गीय राजाको सम्पत्तिको लेखाजोखा पूरासम्म नभइसकेको अवस्थामा ती सम्पत्तिमाथि माओवादीको सरकारदेखि जोगी-सन्यासीसम्मले अतिक्रमण सुरु गरेका छन्। हामी कुनै पनि मूल्यमा राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति लुट हुन नदिन सचेत र सतर्क छौं। हामीमाथि आक्रमणको मूल कारण यही नै हो। शुक्रबारमा प्रकाशित तस्बिरहरू त बहानामात्र थिए। शुक्रबारमा प्रकाशित तस्बिरहरूले कसैको आँखा पोलेको भए धेरैअघि हामीमाथि आक्रमण भइसक्ने थियो। धुन्धुकारीहरूले त्यसका लागि पचासी साता कुर्नु पर्ने थिएन।
यो विक्षिप्त आक्रमणपछि हामीमाथि सद्‍भावनाको ओइरो लागेको छ। राजनीतिक नेताहरू, पत्रकारहरू, प्राध्यापकहरू र पेसाकर्मीहरूको ठूलो समूहले हाम्रा लागि सम्पूर्ण सद्‍भाव र गहिरो चासो देखाउनुभएको छ। यो सद्‍भाव र चासो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण ऊर्जा बनेको छ। सत्यको रक्षा र पहरेदारीमा नेपाल रिपब्लिक मिडियाका प्रबन्ध निर्देशकदेखि साना-ठूला सबै नागरिककर्मी अझै दृढतापूर्वक जुट्ने वातावरणको निर्माण भएको छ।
निश्चय पनि, राजनीतिक अस्थीरताको यो कोलाहलपूर्ण अवस्थामा सत्य र मान्छेका नैसर्गिक अधिकार हताहत हुन्छन्। जस्तो कि, नागरिकमाथिको आक्रमणपछि कवि विप्लव प्रतीकले हामीसँग ऐक्यवद्धता जनाउँदै लेखेका छन- नागरिक दैनिकको कार्यालयमा भएको गुण्डाहरूको अराजक नृत्य र तपाईं एवं तपाईंका सहकर्मीहरूसँग भएको दुर्व्यवहार दण्डहीनताले ग्रस्त राज्यको घीनलाग्दो तस्बिर हो। नेपाली जनता कति कमजोर अवस्थामा छौं भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो यो। कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नभई, कुनै शक्तिपीठको आश्रयबिना, कानुन र अनुशासन नभएको र हुने गुन्जायस पनि नभएको देशमा शस्त्ररहित कहिलेसम्म लडिरहने हो तपाईंहरू?
विप्लवसँग असहमतिको कुनै ठाउँ छैन। तर, स्वतन्त्रताका लागि लडेका र लड्नेहरू हारेको इतिहास पनि छैन। नेपाली जनतालाई नेपालको समर्थ नागरिक बनाउँदै लोकतन्त्र र आर्थिक विकासका पक्षमा स्वच्छ र स्वतन्त्र जनमत तयार गर्ने हाम्रो ध्येय अविचलित रहनेछ। सत्यको खोजमा हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी छ।